दृष्टिकोण – Page4– Banking Khabar
लघुवित्त क्षेत्रमा सदस्यता परित्यागको समस्या : यस्ता छन् कारणहरु
दमन प्रसाद पोखरेल । लघुवित्तीय सेवा दिने नेपालका प्रायः सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा सदस्यता त्याग गर्ने विषयले एउटा ठुलो समस्याको रुप लिँदै गएको छ । त्यसले समाजमा लघुवितप्रति नै नकारात्मक सन्देश दिइरहँदा यसलार्ई रोक्नु निकै नै चुनौतिपूर्ण बन्दै गइरहेको छ । सदस्यहरुले किन लघुवित्तको सदस्यता त्याग गर्छन भन्ने विषयमा सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । […]
वित्तीय स्थायित्वको एक निर्विकल्प उपाय – ‘डाइनामिक प्रोभिजनिङ’
सुरज घिमिरे । अर्थतन्त्र र बैंकिङ क्षेत्रका बीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहन्छ । एकातिर अर्थतन्त्रको अवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको असल कर्जाको परिणामलाई निर्धारण गर्दछ भने अर्काेतिर बैंकिङ क्षेत्रको विकासको गतिले अर्थतन्त्रको गतिलाई दिशा प्रदान गर्दछ । अर्थतन्त्र सुदृढ हुँदा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कर्जा माग बढ्ने र नियमित कर्जाको व्याज एवम् किस्ता उठ्ने हुँदा बैंकिङ […]
मौद्रिक नीतिका लागि तेजेन्द्र लम्सालका चार सुझाव
तेजेन्द्र शर्मा लम्साल । आगामी मौद्रिक नीति सम्बन्धमा सुझाव माग भएकोले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सन्दर्र्भबाट मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्य तथा उपकरण अन्तर्गत देहाय बमोजिमका व्यक्तिगत सुझावहरु उल्लेख गरिएको छ । १. आर्थिक वर्ष २०७३।७४ देखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको ब्याजदर करिडोर पद्धतिलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरी लगानीकर्तामैत्री ब्याजदर उन्मुख भई जसरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कर्जाको ब्याजदरको माथिल्लो सिमा […]
व्याजदर निर्धारणमा आधार दर अर्थात् Base Rate गणना विधि
नारायणलाल श्रेष्ठ । बैकिङ्ग प्रोफेसनमा व्याजदर नौलो विषय होइन । मूलभुत रुपमा बैंकको काम नै व्याज तिरेर निक्षेप तथा सापटीको रुपमा रकम संकलन गर्ने र व्याज लिएर ऋण दिने हो । जसको लागि बैंकले लिने र दिने व्याजदर तोकेको हुन्छ र लिने/दिने व्याजको अन्तरवाट बैंकले खर्चहरु धानेर लगानीकर्ताहरुलाई प्रतिफल दिनु पर्दछ । हेर्दा यति सामान्य […]
अगाडिको खोलो पछाडि भड्खालो : बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम
ढुन बहादुर बुढाथोकी, “सङ्घर्ष” । जेठ ७ सोमबार संघीय संसदको बैठकमा सम्मानीय राष्ट्रपति बिद्यादेबी भण्डारीबाट ०७५/७६ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन भएको छ । संघीयता कार्यान्वयनको प्रथम पदचापमा पस्किएको नीति तथा कार्यक्रमलाई बिशेष महत्वका साथ हेरिएको छ । संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको एकल बहुमत रहेको सन्दर्भमा राष्ट्र प्रमुखबाट प्रस्तुत नीति […]
चिरञ्जिवी चापागाईँ । बीमा समितिले बीमा क्षेत्रमा बीमितहरुको हकहितको लागि विगत साढे दुई दशकदेखि संस्थागत रुपमा नै कार्य गर्दै आएको छ । हालैका दिनहरुमा समितिले अन्तर्राष्ट्रिय बीमा नियमनकारी निकायहरुको अन्तर्राष्ट्रिय संगठनद्वारा प्रतिपादित बीमाका मुलभूत सिद्घान्तहरुलाई आत्मसाथ गर्दै बीमितको हक हितलाई केन्द्रमा राखेर नेपाली बीमा ब्यवसायमा विकसित, नियमित, ब्यवस्थित र नियन्त्रित गर्दै आईरहेको छ । नेपालमा […]
‘उमेर नभई बीमा समितिमा बुढेउली नदेखियोस्’
डा. युवराज खतिवडा । बीमा समितिले स्थापनाको ५० औँ वर्ष मनाइरहेको छ । यस अवसरमा बीमा समितिमा उमेर नै नभई बुढेउलीको अवस्था नदेखियोस बन्ने शुभकामना दिन चाहान्छु । बीमा क्षेत्रको हालसम्मको प्रगति र बीमा समितिको कार्यशैली हेर्दा धेरै समस्याहरु देखिन्छन् । जसलाई आगमी दिनमा सुधार गर्दै लैजानुपर्छ । बीमा एउटा सेवाको व्यापार हो । यहाँ […]
‘बीमा शिक्षा नहुँदा सर्वसाधारणको चासो बढ्न सकेन’
प्रवीण रमन पराजुली । वित्तीय योजना तर्जुमाका लागि जीवन बीमा अत्यन्तै आवश्यक छ । आफ्ना बालबच्चाको र आफ्नो सुरक्षित भविष्यका लागि बीमाको आवश्यकता पर्दछ । वर्तमानमा गरेको निर्णयले भविष्य सुरक्षित बन्छ । बचतले मात्रै फाइनानसीयल प्लानिङ गर्दैन । बीमा यस्तो चिज हो जसले बचत पनि गर्छ र रिक्स पनि बोकिदिन्छ । एकदमै छोटो रुपमा भन्नु […]
‘स्कुल तहबाटै पुँजी बजार शिक्षा जरुरी’
डा. चिरंजीबि नेपाल । संसारका विकसित देशका जति पटि पर्यटकहरु नेपालमा आउँछन्, त्यसमध्येका ५० प्रतिशत पर्यटकहरु सेयरमा लगानी गरेको पैसाको नाफाबाट घुम्न आउँछन् । विकसित मुलुकहरुमा बचत भएको पैसा छ भने सेयर बजार लगानी गरिहाल्ने प्रचलन देखिन्छ । हामीसँग त्यो सोच अझै विकास भएको छैन । बचत गरेर, बचतलाई कसरी लगानी गर्ने भन्ने सोचको नै […]
जीवनयापनको मेरुदण्ड र विकासको अवधारणा हो बजेट
डा.रामप्रसाद दाहाल । बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त संसदमा प्रस्तुत गर्दा वर्तमान अर्थमन्त्रीले व्यक्त गरेको अभिव्यक्ति भित्र नाराले हैन इमान्दारिताले मात्रै देश समृद्ध बन्छ भन्ने वाक्यांशले धेरै नेपालीलाई छोएको छ । यो सत्य तथ्यपरक सूक्तिलाई आत्मसात गरी अघि बढ्नु पर्ने औचित्यवादको सिद्धान्तले पनि पुष्टि गर्छ । अत्यन्त सकारामक र कटु सत्यलाई वरण गरेको यो पंक्तिको सम्प्रेषण […]
नेपालमा पुँजी बजार विस्तारको आवश्यकता
डा. युवराज खतिवडा । नेपालमा सर्वसाधारणले लगानी गर्नका लागि धेरै क्षेत्रहरु छैनन् । त्यसैले, सर्वसाधारणहरुले सेयर बजारमा लगानी गर्ने गरेका छन् । तर, सेयर बजारमा ठूला कम्पनीहरु प्रवेश गरेका छैनन् । एक करोड नाफा कमाउने कम्पनीहरु सेयर बजारमा सूचिकृत छन् भने ५० अर्ब नाफा कमाउने कम्पनीहरुलाई पुँजी बजारमा भित्र्याउन सकिएको छैन । यसले गर्दा लगानीको […]
सेयर बजारको नलेज लिन भृकुटीमण्डपमा आउनुस्
माधव निर्दोष, इभेन्ट म्यानेजर, क्यापीटल मार्केट एक्स्पो २०१८ – नेपालमा पुँजी बजारको औपचारिक सुरुवात भएको दशकौँ भइसकेको छ । यद्यपि, अझै पनि सेयर बजारको विषयमा नागरिकहरुले पर्याप्त जानकारी पाएका छैनन् । ज्ञानको अभावका कारण सेयर बजारप्रति चासो देखाउने सर्वसाधारणको संख्या केही बढेता पनि सेयर बजारमा आइहाल्न सकेका छैनन् । विद्यालय स्तरदेखि लिएर जागीरे स्तरसम्म कतैपनि […]
मुनाफालाई नै कम्पनीको वित्तीय अवस्थाको आधार मान्नु अनुचित
सरोजकाजी तुलाधर । नेपाल राष्ट्र बैंकले पुँजीवृद्धिको योजना ल्याएपछि धेरै फाइनान्स कम्पनीहरुको अस्तित्व मेटिएको छ । वर्तमान अवस्थामा २५/२६ वटा फाइनान्स कम्पनीहरु छन् । यो संख्या अझै पनि घट्नेछ । निकट भविष्यमा नै फाइनान्सको संख्या १६।१७मा झर्नेछ । तरलता समस्या छैन संख्यात्मक रुपले घटेपनि फाइनान्सहरुको सबलीकरण भइरहेको छ । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा अहिले तलरताको समस्या […]
बीमा शिक्षा नहुनु बीमा क्षेत्रको मूख्य चुनौति
नुर प्रकाश प्रधान । नेपालमा बीमा पहुँच अत्यन्त न्युन रहेको छ । मुस्किलले १० प्रतिशत जनतामाझ बीमा पहुँच पुगेको छ । घरपरिवारका हिसाबले गणना गर्दा २५।३० प्रतिशत परिवार बीमाको दायरामा आएका छन् । शिक्षा तथा आर्थिक अवस्थाका कारणले बीमाको पहुँच नबढेको होइन । जस्तै, काठमाडौँमा शिक्षित र आर्थिक अवस्था सबल भएका घरपरिवारहरु छन् । ०७२ […]
‘सहकारी प्रवद्र्धन नै पहिलो प्राथमिकता’
हरी बहादुर रोकाया । गाउँपालीकामा सञ्चालन भएका तिन वटा लघुवित्त संस्थाले जनतालाई ठग्ने काम गरेको गुनासो आएपछि हामीले बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियौँ । तर, वित्तीय संस्थाहरु बन्द गर्ने हामीसँग संवैधानिक अधिकार छैन, त्यो हामीले बुझेका छौँ । त्यसैले, हामीले लघुवित्त संस्था बन्द गर्नेभन्दा पनि स्थानीय सहकारीहरुमार्फत लघुवित्तलाई प्रतिस्थापन गर्ने निर्णय गरेका छौँ । प्रत्येक […]